Wamkelekile ngokufudumeleyo uMnu Steve, umphathi jikelele weRedco izixhobo zokuthengisa Ltd., Canada, ukutyelela inkampani yethu, kwaye unike isikhokelo emsebenzini wethu.
Nge-23 ka-Epreli, uMnu Steve, umphathi jikelele weRedco izixhobo zokuthengisa Ltd., Canada, watyelela iCepai Group kunye nenkosikazi yakhe. U-Liang Yuexing, umphathi wezorhwebo lwangaphandle weqela le-Cepai, wahamba naye ngehlombe. Ngo-2014 ...
Umnumzana GENA, Umphathi Jikelele weQela le-KNG lase-Russia, wakhokela igqiza ukuba liye e-Cepai kwaye lixoxe ngokusebenzisana
Nge-9: 00 kusasa nge-17 kaMeyi, uMnu GENA, Umphathi Jikelele weNkampani yeQela laseRussia, kunye noMnu. Kunye noZheng Xueli, umphathi wezorhwebo lwangaphandle ...
Iprojekthi yeBabu iqhubeka ngokufudumeleyo ngoMatshi 28, 2019
Ngomhla wamashumi amabini anesibhozo kweyoKwindla, uMnu Wael noMnumzana Thomas, iinkokheli zeprojekthi ezimbini ze-Uae Azabia Petroleum Inkampani (ADNOC), kunye noMnu Li Jiqing, intloko yezentengiso kwilizwe jikelele yeChina Petroleum Engineering and Construction Co., LTD. (CPECC), beza kwinkampani ukuza kutshintsha izimvo kunye nokukhokela ...
Iprojekthi yeAdabia isungulwe ngokusesikweni ngoMatshi 25, 2019
Ngomhla wamashumi amabini anesihlanu kweyoKwindla, uMnu Pramod, intloko yezentengiso ye-Uae Azabia Petroleum Inkampani (ADNOC) kunye noMnu Hossam, intloko ye-Quality of ARCHIRODON, batyelele igqiza laseNtshona ukuyokuphanda nokutyelela iprojekthi yeAdabia. UMnu Liang Guihua, uSihlalo weqela le-CEPAI, wakhokela urhwebo lwangaphandle ...